မိုးကောင်းကင်: ကမ္ဘာပျက်သည်အထိရှိနေမည့် " ဘဏ် "
" အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်၊ ဆွစ်ဇာလန် စသောနိုင်ငံများရှိ ဘဏ်များသည် အာမခံ မည်မျှပေးပေး ကမ္ဘာပျက်ပါက အတူတူလိုက်ပျက်ရမည့် ဘဏ်များသာ ဖြစ်သည်။ ဒါနဘဏ်တိုက်၌ အပ်ထားသော ကုသိုလ်ဥစ္စာများကား ကမ္ဘာ ပျက်သော်လည်း မပျက်ပေ။ သံသရာတလျှောက် ကုသိုလ်ပြုထားသူ နောက်သို့ တကောက်ကောက်လိုက်၍ ကောင်ကျိုးပေးနေမည်သာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် အသက် နှစ်ဆယ်အရွယ် စာသင်သားဘ၀က ၀က်သားဟင်း တခွက်ကို စာသင်သားတစ်ပါးအား လှူဒါန်းပြီး ဒါနဘဏ်တိုက်၌ ကုသိုလ်ဥစ္စာများကို အပ်နှံခဲ့သည်။ ထိုကုသိုလ် ဥစ္စာများသည် ယခု အသက် ၄၇ နှစ်တိုင်အောင်သုံး၍ မကုန်တော့ပေ။ ၁၃၇၃ခုနှစ် သင်္ကြန်တွင်း တရားစခန်း၌ ယောဂီ သုံးထောင့်တစ်ရာကျော် ၀င်ရောက်အားထုတ်ခဲ့သည်။ ထိုယောဂီများအတွက် ခုနှစ်ရက်စာ အရုဏ်ဆွမ်း၊ နေ့ဆွမ်းများကို အလှူမခံဘဲ သူ့အလိုလိုလာလှူကြသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ဆူနာမီ ရေလှိုင်းများဝင်ရောက်ခဲ့ရာ မြို့ကြီးနှစ်မြို့ ကွယ်ပျောက်ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ မလှူရ မတန်းရသေးသော ဥစ္စာစည်းစိမ် တိုက်တာခြံမြေအားလုံး ရေလှိုင်းတွေထဲ ပါသွားခဲ့သော်လည်း ဂျပန်လူမျိုးများ ပြုထားသည့် ကုသိုလ်ဥစ္စာများသည်ကား မပျက်မစီး ထာဝရတည်မြဲလျှက် ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သံဃာများကို ဆွမ်းလောင်းလှူခြင်းဖြင့် စိတ်ချရဆုံး ဒါနဘဏ်တိုက်၌ ကုသိုလ်ဥစ္စာများကို အပ်နှံသင့်ကြ ပေသည်။ "
ဆရာတော်ကြီးများ၏ သြဝါကိုခံယူလျက် မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်း ကို အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့တိုင်း အရုဏ်ဆွမ်းနှင့် နေ့ဆွမ်းများ ဆက်ကပ်လောင်းလှူ လျက် ရှိသည့်အပြင် ကြားရက်များတွင် အလှူရှင်တို့၏ မွေးနေ့ ၊ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ ၊ အမှတ်တရနေ့များ တွင်လည်း ဆက်ကပ်လောင်းလှူ လျက်ရှိရာ ယခု ဆိုလျှင် (၂) နှစ် ကျော်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ် ပါသည်။ ထိုသို့ ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပရှိ အလှူရှင်တို့၏ စေတနာ သဒ္ဓါတရားထက်သန်စွာဖြင့် လှူဒါန်းမှုတို့ကြောင့် စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးရှိ သံဃာတော်များအတွက် ဆွမ်းကိစ္စအဆင်ပြေလျက်ရှိကြပါသည်။ ထိုကြောင့် စေတနာရှင်များ အနေဖြင့် သံဃာတော်များအတွက် ဆွမ်းကိစ္စ ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်ကြစေရန်အတွက် ဆွမ်း ဆက်ကပ် လောင်းလှူခြင်းများတွင် ပါဝင် လှူဒါန်းနိုင်ကြပါသည်။
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး ဆွမ်းလောင်းအသင်းသို့ လှူဒါန်းရာတွင် ရာသက်ပန် ထာဝရငွေပဒေသာပင်စိုက်၍ လှူဒါန်း နိုင်သလို မိမိတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော မွေးနေ့၊ နှစ်ပတ်လည်နေ့ နှင့် အမှတ်တရနေ့များ တွင်လည်း အရုဏ်ဆွမ်း ၊ နေ့ဆွမ်းအတွက် သီးသန့် လှူဒါန်းနိုင်ကြပါသည်။ ထိုသို့လှူဒါန်းရာတွင် အရုဏ်ဆွမ်းအတွက် (၆၅၀၀၀)ကျပ် နှင့် နေ့ဆွမ်းအတွက် တစ်သိန်းနှစ်သောင်းငါးထောင် (၁၂၅၀၀၀) ကျပ် နှုန်းဖြင့်လည်း ပါဝင်ကုသိုလ်ယူ လှူဒါန်းနိုင်ကြပါသည်။
တစ်သတ်တာ ထာဝရ ငွေပဒေသာပင် အတွက်လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် ငွေပဒေသာပင်စိုက်ထူနိုင်ရန်အတွက် ငွေပဒေသာပင် တစ်ခုလျှင် (၅၀၀၀၀)ကျပ်နှုန်း သတ်မှတ်ထားပြီး အလှူရှင်တစ်ဦးလျှင် ငွေပဒေသာပင်တစ်ခုမှ မိမိတို့ ဆန္ဒရှိသလို ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ကြပါသည်။ ထာဝရငွေပဒေသာပင်အတွက် ရရှိလာသောအလှူငွေများအားလုံးကို ဘဏ်တွင်ထည့်ကာ ဘဏ်မှရရှိသည့် အတိုးကိုသာ အပတ်စဉ် တနလာင်္နေ့တိုင်း ဆွမ်းလောင်းအသင်းအတွက် အသုံးပြုလှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး တစ်သက်တာ ထာဝရငွေပဒေသာပင်များကို ထည့်ဝင်လှူဒါန်းထားကြပါက မိမိတို့သေဆုံးပြီးသွားသည့်တိုင်အောင် ကမ္ဘာတည်နေသ၍ အပတ်စဉ်တနလာင်္နေ့တိုင်း မိမိတို့ပြုလုပ်လှူဒါန်းထားသော အလှူများက ထာဝရတည်တံ့၊ ကုသိုလ်ရရှိနေမည် ဖြစ်ပါသောကြောင့် မိဘပြည်သူများ အနေဖြင့် စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးမှ သံဃာတော်များကို ဆွမ်းလောင်းလှူခြင်းဖြင့် စိတ်ချရဆုံး "ဒါန" ဘဏ်တိုက်တွင် ကုသိုလ်များကို အပ်နှံနိုင်ကြပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ မန္တလေးမှ ငွေပဒေသာပင်အတွက် လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့် တစ်ခါတည်း လှူရန် အဆင်မပြေသူများ တစ်လလျှင် (၅၀၀၀)ကျပ် သို့မဟုတ် (၁၀၀၀၀)ကျပ် နှုန်းဖြင့်လည်း လှူဒါန်းနိုင်ကြပါသည်။ ထိုသို့လှူဒါန်းလိုလျှင် အိမ်အရောက် အလှူခံငွေများ လစဉ် လာရောက်ကောက်ခံပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
လှူဒါန်လိုသူများအနေဖြင့် အောက်ပါ အလှူခံ မောင်နှမများထံသို့ ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ကြပါသည်။
Ph: 092110202 / 011290362
မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း ၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်း တစ်သက်တာထာဝရ ငွေပဒေသာပင်အတွက် အလှူရှင်များ-
၁.မေတ္တာရှင်ဆရာတော်(ရွှေပြည်သာ) ဆယ်သိန်း (၁၀၀၀၀၀၀) ကျပ်
၂. ဦးဇင်း ဦးကောဝိဒ (စစ်ကိုင်း) နှစ်သိန်း (၂၀၀၀၀၀) ကျပ်
၃.ကိုဖြိုး(ရွှေအိမ်ဖြူတယ်လီဖုန်း-မန္တလေး) တစ်သိန်း (၁၀၀၀၀၀) ကျပ်
၄.Dr.မြတ်ဥာဏ် + ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း မိသားစု (ရန်ကုန်) တစ်သိန်း (၁၀၀၀၀၀) ကျပ်
၅.Dr.မျိုးမင်းသန့်+မမေယမင်းသူ (ရန်ကုန်) တစ်သိန်း (၁၀၀၀၀၀) ကျပ်
၆.Dr. ကြည်ချိုအောင် (ရန်ကုန်) တစ်သိန်း (၁၀၀၀၀၀) ကျပ်
၇.ကိုဇော်မိုးဦး+ဒေါ်ညိုညိုခန့် မိသားစု ငါးသောင်း (၅၀၀၀၀) ကျပ်
၈.ကိုငြိမ်းတေဇထွန်း(စင်္ကာပူ) (သြဂုတ်လမှလစဉ် 50 SGD)
၉.ကိုအောင်မြင့်ဦး+မမေသဇင်အုန်း၊သား-Matthew မိသားစု (စင်္ကာပူ)(စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၆၀၀)
၁၀.ဦးမြင့်သူ+ဒေါ်မွှေးမွှေးကြူ ၊သမီးလေး ဇင်မွန်ထက် မိသားစု(ကနေဒါ) နှစ်သိန်း (၂၀၀၀၀၀) ကျပ်
၁၁.ကိုမျိုးဦး+မခိုင်ခင်ဝင်း မိသားစု (စင်္ကာပူ) တစ်သိန်း (၁၀၀၀၀၀) ကျပ်
၁၂.Mr.Koyanagi + မသင်းသင်းနိုင် ၊သား HIROAKI မိသားစု (ဂျပန်) တစ်သိန်း (၁၀၀၀၀၀) ကျပ်
၁၃.ဦးမျိုးသိန်း နှင့် alor gajah ,malacca , malaysia မှ မြန်မာလုပ်သားများကောင်းမှူ။ ငါးသောင်း (၅၀၀၀၀) ကျပ်
၁၄.ကိုဇင်လင်းဇော် + မသက်မာ (စင်္ကာပူ) (စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀ ) (KNA)
၁၅.ဒေါ်အေးအေးဝင်း အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစု ကောင်းမှူး။ ငါးသောင်း (၅၀၀၀၀) ကျပ်
၁၆.ကိုခင်မောင်အေး+မတင်ညိုလင်း မိသားစု(စင်္ကာပူ) မှ ဇူလိုင် ၂၉ ရက် ကိုခင်မောင်အေးမွေးနေ့အလှူ (100 SGD )
၁၇.မယွန်းရတီလှိုင် (နန်းထိုက်ဖုန်းအပိုပစ္စည်း နှင့်အရောင်းဆိုင် ၊ မလေးရှား) ငါးသောင်း (၅၀၀၀၀) ကျပ်
၁၈.ဦးကိုကိုနိုင် + ဒေါ်မြင့်သဲစုစံ + သားသား မောင်ဇွဲလုလင်နိုင် မိသားစု (စင်္ကာပူ)တစ်သိန်းငါးသောင်း (၁၅၀,၀၀၀)ကျပ်။
၁၉. ဦးချစ်ထွန်း + ဒေါ်အိနန်း တို့အားရည်စူး၍ မစန်းစန်းခိုင် (စင်္ကာပူ) တစ်သိန်း (၁၀၀,၀၀၀) ကျပ်။
၂၀.ကွယ်လွန်သူဖခင် ဦးတင်အောင် နှင့်မိခင်ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ရီတို့အားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု(ထိုင်းနိုင်ငံ) တစ်သိန်း (၁၀၀,၀၀၀)ကျပ်
၂၁.ဦးဇော်သောင်း+ဒေါ်အေးသန်း မိသားစု (စစ်ကိုင်းမြို့) နှစ်သိန်း (၂၀၀၀၀၀) ကျပ်
၂၂.ဦးကျော်ဝင်း +ဒေါ်စီလာ မိသားစု (ပြင်ဦးလွင်မြို့) တစ်သိန်း (၁၀၀၀၀၀) ကျပ်
၂၃.ရွှေလမ်းငွေလမ်းဝင်းကြည် ငါးသောင်း (၅၀၀၀၀) ကျပ်
၂၄.ဦးသာဥာဏ်+ဒေါ်အေးအေးမြတ် မိသားစု (တောင်ကြီး) သုံးသောင်း (၃၀၀၀၀) ကျပ်
အားလုံးပဲ အလှူရှင်တို့နှင့်အတူ ကြည်ညိုသဒ္ဓါပွားများ ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ...
အလှူ ဒါန ဆိုတာ ပြုလုပ်နိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်
ညောင်စေ့လောက်လှူလဲ စိတ်ထားတတ်ရင် ညောင်ပင်